Levitikus 24 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
24 Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi: 2 “Bayalele oonyana bakaSirayeli ukuba bakuzisele ioli esulungekileyo yeminquma, engqushiweyo, yesikhanyiso,+ ukuze sihlale sikhanyisile rhoqo isibane.+ 3 Ngaphandle kwekhuselo leSingqino ententeni yokuhlangana wosimisa ngolungelelwano rhoqo uAron phambi koYehova kususela ngokuhlwa kude kube sekuseni. Yoba ngummiselo wenu lowo ezizukulwaneni zenu kuse kwixesha elingenammiselo. 4 Wozimisa ngolungelelwano rhoqo izibane+ esiphathweni sezibane+ segolide esulungekileyo phambi koYehova.+ 5 “Uze uthabathe umgubo ocolekileyo, uwubhake ube ngamaqebengwana abusazinge alishumi elinesibini. Iqebengwana ngalinye elibusazinge libe zizahlulo ezibini zesishumi se-efa. 6 Uze uwabeke abe yimikrozo emibini, abe mathandathu mkrozweni mnye,+ etafileni yegolide esulungekileyo ephambi koYehova.+ 7 Yaye umele ubeke intlaka yokuqhumisa phezu komkrozo ngamnye, ibe sisonka sesikhumbuzo eso,+ umnikelo wasemlilweni kuYehova. 8 Wohlala esimisa rhoqo ngolungelelwano phambi koYehova ngemihla yonke yesabatha.+ Yoba ngumnqophiso wexesha elingenammiselo lowo koonyana bakaSirayeli. 9 Soba sesika-Aron noonyana bakhe,+ yaye bamele basidlele endaweni engcwele,+ kuba siyeyona nto ingcwele kuye evela emnikelweni wasemlilweni kaYehova, njengommiselo wexesha elingenammiselo.” 10 Ke kaloku unyana womfazi ongumSirayeli, obengunyana wendoda engumYiputa,+ waya phakathi koonyana bakaSirayeli, wasuka lo nyana womSirayelikazi wasukuzana+ enkampini kunye nendoda engumSirayeli. 11 Unyana lowo womfazi ongumSirayeli wathetha kakubi ngalo iGama+ waza waliqalekisa.+ Bamzisa ke kuMoses.+ Kwenzeka ke ukuba, libe igama likanina lalinguShelomiti, intombi kaDibri wesizwe sakwaDan. 12 Bamfaka eluvalelweni+ ade uYehova avakalise ngokuqondakalayo into emayenziwe ngaye.+ 13 Wathetha uYehova kuMoses, esithi: 14 “Mkhupheleni ngaphandle kwenkampu lowo uqalekisileyo;+ yaye bonke abo bamvileyo bamele babeke izandla zabo+ entlokweni yakhe, ize imgibisele ngamatye indibano iphela.+ 15 Uze uthethe koonyana bakaSirayeli, uthi, ‘Ukuba uthe nawuphi na umntu waqalekisa uThixo wakhe, wophendula ngesono sakhe. 16 Ngoko othetha kakubi ngegama likaYehova makabulawe afe.+ Indibano iphela yomgibisela ngamatye. Umphambukeli kwanoyinzalelwane yenu othe wathetha kakubi ngalo iGama makabulawe.+ 17 “‘Ukuba umntu uthe wabetha waza wabulala nawuphi na umphefumlo ongumntu, makabulawe afe.+ 18 Obetha abulale umphefumlo wesilwanyana, ufanele awubuyekeze, umphefumlo ngomphefumlo.+ 19 Umntu xa athe wasenzakalisa isinxulumani sakhe, kanye njengoko enze ngako yena, makwenziwe njalo nakuye.+ 20 Ukwaphulwa ngokwaphulwa, iliso ngeliso, izinyo ngezinyo; njengoko amenzakalisileyo umntu, makwenziwe njalo nakuye.+ 21 Obethe isilo wasibulala+ ufanele asibuyekeze,+ kodwa yena obethe umntu waza wambulala ufanele abulawe.+ 22 “‘Masibe sinye isigwebo senu. Esomphambukeli masifane nesalowo uyinzalelwane,+ ngokuba ndinguYehova uThixo wenu.’”+ 23 Emva koko uMoses wathetha koonyana bakaSirayeli, bamkhuphela ngaphandle kwenkampu lowo uqalekisileyo, baza bamgibisela ngamatye.+ Ngako oko benza oonyana bakaSirayeli kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses.